ကယ်လ်စီယမ်ကလိုရိုက်ဒီဂျိုက်ဒီသည်ငါးမွေးကန်ရှိရေကန်၏ PH တန်ဖိုးကိုလျှော့ချရန်အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ ငါးမွေးကန်များရှိရေနေသတ္တဝါများအတွက်သင့်လျော်သော PH တန်ဖိုးသည်အယ်ကာလိုင်းအနည်းငယ် (ကြားခံ) (ကြားခံ (၇) မှ ၈.၅) ကြားနေဖြစ်သည်။ pH တန်ဖိုးပုံမှန်မဟုတ်သောများလွန်းပါက (PH≥9.5) ၎င်းသည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ကယ်လ်ဆီယမ်ကလိုရိုက်ဒြပ်စင်များဖြစ်သောကလိုရင်းနှင့်ကယ်လ်ဆီယမ်ပါဝင်သောဆား၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ CaCl2၊ အရောင်မရှိသောကုဗကြည်၊ အဖြူသို့မဟုတ်အဖြူရောင်၊ granular၊ လုံး ၀၊ မမှန်သောအမှုန့်များပါဝင်သည်။ အနံ့မရှိသော၊ ခါးသောအရသာ။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ionic halide ဖြစ်ပြီးအခန်းအပူချိန်၌အဖြူရောင်အစိုင်အခဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
စက္ကူလုပ်ငန်းခွင်တွင်ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိုက်ဓာတ်မပါ ၀ င်ပါ
စက္ကူလုပ်ငန်းသည်ဆိုဒီယမ်ဆာလ်ဖိုက်ထုတ်ကုန်များ၏အများဆုံးစားသုံးသူဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ်ဆာလ်ဖိုက်သည်စာရွက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင်အရေးအပါဆုံးပြုလုပ်သည့်အထူးသဖြင့်ထင်းမဟုတ်သောပျော့ဖတ်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤ pulping နည်းလမ်း၏အားသာချက်များမှာအလင်းရောင်၊ အရောင်ချွတ်ဆေးနှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုသုံးစွဲမှုနည်းသည်။
ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်ဓာတုဗေဒကုမ္ပဏီကြီး ၁၀၀ နီးပါးသည်“ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ” စည်းရုံးခဲ့ကြသည်! စျေးနှုန်းတက်ခြင်းသည်နောက်ထပ် ၃-၆ လအထိကြာနိုင်သည်။
လှိုင်းတစ်ခုသည်အဆင့်မကျ၊ နောက်ထပ်မြင့်တက်မှုတစ်ခု! ဦး ဆောင်သောဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း ၁၀၀ နီးပါးသည်“ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ” ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ ဓာတုစျေးကွက်၏ ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအားအကြားကွာဟချက်ကပိုဆိုးသည်။ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုအသစ်တစ်ခုစတင်နိုင်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်ဓာတုဗေဒ ၁၀၀ နီးပါးရှိကြောင်းနားလည်ထားသည်။
ဆိုဒီယမ်ဆိုဒါနှင့်ဆာလ်ဖာနှစ်ခုစလုံးနှင့်အတူဆိုဒီယမ်အလိုက် metabisulfite စျေးနှုန်းများလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လျက်ရှိသည်
ဇန်နဝါရီလတွင်ပြည်တွင်း Soda Ash၊ SMBS ၏အဓိကပစ္စည်းများဖြစ်သောဆာလ်ဖာစျေးနှုန်းများဆက်လက်မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်များကြောင့်အချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည်ဆိုဒီယမ်မီဘစ်ဆာulfite၏စျေးကွက်ပေါက်စျေးကိုအနည်းငယ်မြင့်တက်စေပါသည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကဖေဖော်ဝါရီလတွင်ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ထုတ်ကုန် ၄ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ထုတ်လုပ်သူစျေးနှုန်းအညွှန်းကိန်း (PPI) ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတစ်နှစ်ကို ၁.၇ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တယ်။ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့အမျိုးသားစာရင်းအင်းဗျူရို (NBS) ရဲ့အဆိုအရစက်မှုထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် ၀ ယ်ဈေးက ၂.၄ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တယ် တစ်နှစ် -on- တစ်နှစ်နှင့် 1.2 ရာခိုင်နှုန်းတစ်လ -on- လ။ အလ ...
Soda Baking သည်အရိုးပွရောဂါအတွက်ပစ်မှတ်ထားကုသမှုဖြစ်နိုင်သည်
“ အဆိပ်မရှိသောနှင့်အန္တရာယ်ကင်းသောမုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ (ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်) ကိုလုံခြုံစိတ်ချရသော nano 'capsule' (liposome) တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ အရိုးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စွမ်းအားရှိသော tetracycline ကိုအရိုးမျက်နှာပြင်သို့စုပ်ယူရန်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ အရိုးကျိုးမှုအရိုးများပျက်စီးသောအခါ အက်ဆစ်များကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်တစ်ရှူးများသည် ...
ဖောက်သည်များအတွက်နမူနာကိုစိစစ်စဉ်ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်အား 1. စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခြင်း ၂ လတာကာလအတွင်းဓါတ်ကူပစ္စည်းနှစ်ခုကိုအပြိုင်စမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အနိမ့်ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ပါဝင်မှု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရလဒ်များသည်အခြေခံအားဖြင့်တသမတ်တည်းဖြစ်သော်လည်းအဆင့်မြင့်ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ပါဝင်မှုမှာသွေဖည်သည်။ w ...
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံရှိဆိုဒီယမ်မီဘစ်ဆာulfiteစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - စျေးကွက်ပမာဏယွမ် ၃.၀၄ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ဆိုဒီယမ်အမ်မီဘစ်ဆာulfiteထုတ်လုပ်မှုသည်တန်ချိန် ၈၈၅၀၀၀ ရှိပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ဆိုဒီယမ်မီဘစ်ဆာulfiteထုတ်လုပ်မှုသည်တန်ချိန် ၁.၇၉၅ သန်းအထိတိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆိုဒီယမ်မီဘစ်ဆာရှိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏ဒြပ်ပေါင်းများကြီးထွားမှုနှုန်းသည် ၁၀.၆၂% ရှိခဲ့သည်။ တရုတ်ဆိုဒီယမ် Meta တွင် ၀ ယ်လိုအားသည်
Mgcl2 အစိုင်အခဲ, ဘေရီယမ်ကလိုရီ Watertreatment, အကောင်းဆုံးမဂ္ဂနီစီယမ်အလွှာများ, Cabr2, ဆိုဒီယမ် Ash ကို, ဆိုဒါ Ash Price,